कप्तान नियुक्त भएपछि के भन्छन सन्दीप लामिछाने ? - ramechhapkhabar.com
कप्तान नियुक्त भएपछि के भन्छन सन्दीप लामिछाने ?
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र क्रिकेट खेलाडीबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला सन्दीप लामिछानेले कप्तान नियुक्त भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। खेलाडी वर्गीकरणमा असन्तुष्टी जनाएका खेलाडीले सञ्चारमाध्यममा बोलेपछि आक्रमक बनेको क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानबाट हटाउँदै लामिछानेलाई नियुक्त गरेको थियो।
गत बुधवार बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले बहुमतबाट चार खेलाडीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा मल्लको कप्तानी र दीपन्द्र सिंह ऐरीको उपकप्तान पद खोसिएको थियो।
कप्तानको जिम्मेवारी पाएपछि लामिछानेले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका हुन्। उनले नेपाली क्रिकेट टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकोमा आफूले सम्मानित महसुस गरेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘छातीमा नेपालको झण्डा लगाउने मेरो सधैँको सपना थियो र अब नेपाल क्रिकेट टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा मैले सम्मानित महसुस गरेको छु। म क्यान, नेपालका जनता र विश्वभरिका सबै फ्यानहरूप्रति निःशर्त समर्थन र प्रार्थनाको लागि कृतज्ञ छु।’
टिमको रूपमा अबको योजना नेपाललाई क्रिकेट विश्वको नक्सामा प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजाने रहेको लामिछानेले बताएका छन्। त्यसको लागि आफूहरु एक परिवार, एक टिम र एक युनिटको रूपमा खेल्ने उनको भनाइ छ। उनले टिममा सबैका लागि ढोका खुला रहने समेत बताए।
‘सबै एसोसिएट राष्ट्रहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका छन्। क्यान र आईसीसीसँगको छलफलमा हामीले पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूसँग थप क्रिकेटको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने छ। हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ र एकसाथ हामी जस्तोसुकै सफलता पनि हासिल गर्न सक्छौँ,’ उनले भने।
क्यानको कारबाहीमा परेका चार खेलाडीले कारबाहीप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर खेलाडीहरुले आफ्नो हकअधिकारको लागि आवाज उठाएकै भरमा कारबाही हुनु निराशाजनक रहेको बताएका थिए। क्यानले मल्ल र ऐरीसहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई पनि कारबाही गरेको छ।